, यी हुन् एकअर्काको रगत पिउँने एक अचम्मको जोडी, थाहा पाउनुहोस्
माघ ५, २०७६ | 19th January, 2020
एकअर्काको रगत पिउँने एक अचम्मको जोडी
4550 पटक पढिएको
प्रेमी/प्रेमिकाले एक अर्काको चुम्बन गर्नु स्वभाविकै हो । तर यो दुनियाँमा एउटा प्रेमजोडी यस्तो छ, जसले एक अर्काको रगत पिउँछन् ।सुन्दैमा झसङ्ग भइने यो सत्य घटना इटालीको हो । इटालीका ती ब्वायफ्रेण्ड र गर्लफ्रेण्डले एक अर्काको रगत पिउँदछन् । यसको कारण पनि निकै अनौठो छ ।
द मिररका अनुसार करीब पाँच वर्ष पहिले डेनिस नामका ती युवकलाई सर्कसका लागि एकजना सहायक चाहिएको थियो । त्यसको लागि उनले फेसबुकमा विज्ञापन दिए । त्यहीँ क्रममा उनको इलारिया नामकी युवतीसँग चिनाजानी भयो । त्यसबेला देखि डेनिस र इलारिया सँगै छन् ।
जर्मनीमा एकपटक भूतको कथामा आधारित एक शो हेरेसँगै उनीहरुले एक अर्काको रगत पिउन सुरु गरेका हुन् । उक्त शोमा प्रेम प्रेमिकाले एक अर्काको रगत पिउँदथे । त्यसयता उनीहरुले निरन्तर एक अर्काको रगत पिउँदै आएका छन् ।
रगत पिउने क्रममा डेनिस र इलारिया दुवैजनाले केही कुराको विशेष ख्याल गर्दछन्, खासगरी गर्मीका दिनहरुमा जतिबेला रगत छिट्टै जम्दछ । जसका कारण सिरिञ्जबाट रगत निकाल्ने बित्तिकै उनीहरुले रगत पिइहाल्छन् ।
डेनिसका अनुसार रगत एक पौराणिक जूस हो, जुन जीवनसँग जोडिएको छ । डेनिस र इलारियाका अनुसार एकजनाको रगत अर्को व्यक्तिको शरीरमा जानाले प्रेममा अझै बढोत्तरी हुन्छ । साथै दुवैजनाको स्वभावमा पनि समानता आउनेछ । सोही विश्वासमा उनीहरुले एक अर्काको रगत पिइरहेका छन् ।-एजेन्सी
प्रधानमन्त्रीलाई पत्र – बनाऔ त्याग र शान्तिले देश
यस्तो छ भारतमा नोरा फतेहीको चर्चा हुनुका कारण !
अभिनेता राजबल्लभ कोइराला बाबु बन्दै (तस्विर सहित)
सभामुखमा सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने नेकपा सचिवालय निर्णय
प्रदेश मन्त्रिमण्डल विस्तार : चार राज्यमन्त्री नियुक्त
गायिका राउतविरुद्ध ‘अभद्र व्यवहार’ कसुरमा पक्राउको अनुमति
थाहा पाउनुहोस्, देशै अनुसार यौनका विषयमा फरक–फरक कानून
लुम्बिनीका बौद्धस्थललाई एकापसमा जोडेर ‘बुद्धपथ’ बनाउनुपर्छ : मन्त्री भट्टराई
Copyright © 2019 nepalpatra.com. All Rights Reserved.